Semalt - कसरी एक वेबसाइट बाट स्वचालित रूप बाट डाटा पुल गर्ने?
Semalt - कसरी एक वेबसाइट बाट स्वचालित रूपमा डेटा तान्न?
फायरफक्स सर्वश्रेष्ठ होईन, र विश्वको सबैभन्दा प्रख्यात वेब ब्राउजर होईन - यो सम्मान अब गुगल क्रोममा जान्छ - तर यसमा अझै पनि तपाईंको काम सजिलो पार्न धेरै संख्याका एड-अनहरू छन्। वेबसाइटबाट कसरी डेटा तान्नका लागि? हालसालैका वर्षहरूमा, फायरफक्स एड्स-ऑनहरूको ठूलो संख्या सुरू गरिएको छ जसले तपाईंको कामलाई सजिलो बनाउँदछ र तपाईंलाई डाटाबेसलाई गतिशील र साधारण वेब पृष्ठहरूबाट आरामसँग तान्न सहयोग गर्दछ।
जबकि फायरफक्स आफ्नै दायाँ मा एक गोल गोल वेब ब्राउजर हो, यसको कार्यक्षमता र क्षमताहरू यी एड्-अनहरू स्थापना गरेर विस्तार गर्न सकिन्छ। उनीहरूले तपाइँको साइटको प्रदर्शन बढाउन मद्दत गर्दछ र प्रयोगकर्ता अनुभवलाई एक हदसम्म सुधार गर्दछ।
१. यूआरएल एक्स्ट्रैक्टर:
कसरी एक वेबसाइट बाट डाटा खींचने को लागी? यूआरएल एक्स्ट्रैक्टरले तपाईंलाई एक पटकमा बहु वेब पृष्ठहरूबाट जानकारी तान्न अनुमति दिन्छ, तपाईंको समय र उर्जा बचत गर्दै। यसले नियमित आधारमा अद्यावधिक र नयाँ डाटा ल्याउँदछ, यसलाई तपाईंको पहुँचको लागि भण्डार गर्दछ, र तपाईंलाई तपाईंको आवश्यकताहरू र इच्छा अनुसार पुनर्गठित गर्न अनुमति दिन्छ। यूआरएल एक्स्ट्रैक्टर मुख्य रूपमा वेबसाइटको बिभिन्न यूआरएलहरूलाई लक्षित गर्न प्रयोग गर्दछ, अमेजन र ईबेबाट उत्पादनहरू र मूल्यहरूको बारेमा जानकारी स .्कलन गर्दछ, र असंगठित डाटालाई संरचित र संगठित फारममा रूपान्तरण गर्दछ। तपाईंसँग प्रोग्रामिंग सीपहरू हुन आवश्यक छैन र यस सेवा प्रयोग गर्न प्राविधिक ज्ञानको आवश्यकता पर्दैन किनकि यसले शून्य कोडिंगको साथ काम गर्दछ।
टेबलस्क्र्यापर मुख्यतया समाचार आउटलेटहरू, ट्राभल पोर्टलहरू, र अन्य समान, जटिल वेबसाइटहरूबाट डाटा तान्न / निकाल्न प्रयोग गरिन्छ। यो एड्-अनले तपाईंलाई नियमित आधारमा सामग्री स्क्र्याप गर्न अनुमति दिन्छ र मुख्य रूपमा इन्टरनेटमा टेबल र चार्टहरू लक्षित गर्न प्रयोग गरिन्छ। तपाईं HTML टेबल र पीडीएफ फाईलहरूलाई लक्षित गर्न टेबलस्क्र्यापर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ र तिनीहरूबाट सजीलो र द्रुत गतिमा उपयोगी डाटा तान्न सक्नुहुनेछ। कसरी एक वेबसाइट बाट डाटा खींचने को लागी? निस्सन्देह टेबल स्क्र्यापरले तपाईंको लागि त्यो कार्य गर्दछ र तपाईंको समय र उर्जा बचाउनेछ। यसले तपाईंलाई बजार अनुसन्धान र डाटा निकासीको लागि अन्तर्क्रियात्मक एड्-अनको रूपमा सेवा गर्दै, केहि महिनामा तपाईंको कम्पनीको नेतृत्वको ठाउँमा पुग्दछ।
कसरी एक वेबसाइट बाट डाटा खींचने को लागी? यदि तपाईं अनलाईन शपिंग साइट निर्माण / विकास गर्न चाहनुहुन्छ र नियमित आधारमा बिभिन्न उत्पादनहरूको मूल्य ट्र्याक गर्न चाहानुहुन्छ भने एक्सपोर्ट टोकसभी तपाईंको लागि सही विकल्प हो। यो एड-अनले तपाईंलाई अमेजन, eBay, र अन्य समान साइटहरूलाई लक्षित गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ र तपाईंको आवश्यकता अनुसार उपयोगी जानकारी तान्दछ। तपाईं त्यसपछि JSON वा CSV फाईलहरूमा डाटा निर्यात गर्न सक्नुहुनेछ वा तपाईंको हार्ड ड्राइभमा सिधा डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ।
बोनस पोइन्ट - मोजेन्डा र अक्टोपार्स प्रयास गर्नुहोस्:
यदि तपाईं माथिको माथि उल्लिखित एड्सहरूसँग सहज हुनुहुन्न भने, तपाईं अक्टोपार्से र मोजेन्डा वेबसाइटबाट डाटा तान्न कोशिस गर्न सक्नुहुनेछ। दुबै मोजेन्डा र अक्टोपार्से सबै भन्दा राम्रो सेवाहरू हुन् र तपाईंलाई विभिन्न वेब पृष्ठहरूबाट सामग्री निकाल्न अनुमति दिन्छ। मोजेन्डाले वेबसाइटबाट डेटा तान्न अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्दछ र द्रुत गतिमा जानकारी ल्याउँदछ। अर्कोतर्फ, अक्टोपार्से सबै अपरेटि systems प्रणाली र वेब ब्राउजरहरूको साथ उपयुक्त छ र तपाईंलाई तपाईंको वेब पृष्ठहरूलाई राम्रो तरिकाले सूचकांक गर्न अनुमति दिन्छ।